Radio Don Bosco - Naniraka hampanapaka ny lohan’i Joany i Herôda ary lasa nilaza izany tamin’i Jesoa ny mpianany
Manampy antsika handinika ny fomba fiainantsika ny finoana maha kristianina antsika ireo karazan’olona aroson’ny Evanjely anio :
I Joany Batista. Ireo vondrona kristianina miezaka ny hiaina ny rariny sy ny hitsiny araka ny Evanjely. Karazana kristianina sahy ny manitsy am-pirahalahiana ny fahadisoanao mba hiovanao amin’ireo toetra tsy mendrika amin’ny maha kristianina. Karazana kristianina te hiaina lalindalina kokoa ny finoany sy ny Evanjely araka ny nampitan’i Jesoa Kristy azy. Mampalahelo ny mahatsapa fa efa mihalany tamingana ity karazana kristianina voalohany ity.
I Heroda mpanjaka. Ireo kristianina finaritra maheno ny fanananarana avy amin’iretsy karazana kristianina eo aloha, saingy tsy miafara amin’ny fibebahana velively akory ny zavatra ataony. Ireo karazana kristianina tsy manana fotoana handinihana mialoha ny handraisany fanapahan-kevitra fa manaraka ny onjam-piainana dia avy eo mora manenina. Izany hoe, ireo kristianina milaza foana hoe : "Eo mahita izy e !". Karazana kristinina matahotra vavam-bahoaka sy matin-kena-maso ka mahavita mandray fanapahan-kevitra tsy vokatry ny fony, satria izany no heverina fa mahafaly ny manodidina ; izay no heverina hahaela fanapahana sy tsy hahatapaka ny sotro fihinanany.
I Herodiada indray, dia ireo karazana kristianina mahay manararaotra ny halemen’ny sasany ary mahavita milalao ny fihetseham-pony mihitsy aza : ireny no atao hoe kristianina mampifilafila. Ireo karazana kristianina te hanalava ny maha tokantrano imaso azy, fa tsy vonona mihitsy ny hiroso amin’ny lalindalina kokoa amin’ny sakramentan’ny fanambadiana kanefa tsy manana sampna velively amin’ny firosoana amin’izany izy roa ; ary loza ho an’izay mikitika an’io fomba fiainany io fa avy hatrany dia tapa-doha sy mandraingiraingy.